I-Avalon House, ilungele umsebenzi okude-i-100mb Wifi - I-Airbnb
I-Avalon House, ilungele umsebenzi okude-i-100mb Wifi
Hartbeespoort, North West, eMzantsi Afrika
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguShaun
Ifanelekile ekusebenzeni kude, kunye ne-100mb yeFiber Wifi kunye ne-DSTV Premium. IAvalon yindlu yentengiso ekwindawo ekhuselekileyo yaseKosmos kwiDama laseHartbeespoort, ngaphantsi kweyure ukusuka ePitoli naseRhawutini. Ifanelekile kwindawo yokuhlala wedwa, ebekwe ecaleni kwendawo yogcino lwendalo enabamelwane abambalwa kufutshane.
Indlu yokuzenzela ukutya inamagumbi okulala ama-6, amagumbi okuhlambela ayi-5, indlu yangasese yeendwendwe, amagumbi okuphumla amabini, iiveranda ezi-3, iqula elinombono omangalisayo weDama laseHartbeespoort, kunye neentaba.
Indlu yeendwendwe yaseAvalon yindlu yamabali ama-3, enezona mbono zimangalisayo zedama laseHaartebesport kunye neentaba zaseWaterburg. Umgangatho/ibali ngalinye lineebhalkhoni ezitshayelayo ezijonge phezu kwedama! Zonke iindawo zokuzonwabisa zigxile ekufumaneni iimbono eziphefumlayo, ngelixa uphumla.
Kukho igumbi lokulala le-6 (en-suite) elinesango lokungena elahlukileyo endlwini.
Unikezela ngebraai yesintu (i-BBQ) kunye ne-braai yegesi (i-BBQ) kodwa nceda uqaphele igesi, iinkuni okanye amalahle ziindleko zeendwendwe.
Sinejenereyitha xa kukho ukusilela kwamandla ukuze ube nokukhululeka ngalo lonke ixesha.
Nceda uqaphele ukuba indlu ixhotyiswe ngezixhobo zokuhlola ingxolo ezilinganisa inqanaba le-decibel yendlu, ukuthintela ingxolo ephezulu kakhulu eyenziwa ziindwendwe kunye namaqela asendle.
4.59 out of 5 stars from 149 reviews
4.59 · Izimvo eziyi-149
IAvalon Guest house yindlu yeendwendwe ephezulu ekwilali yaseKosmos, ngaphantsi kweyure ukusuka ePitoli naseRhawutini.
Indlu yeendwendwe eziziphekelayo inamagumbi okulala ama-6, amagumbi okuhlambela ayi-5 (neebhafu ze-jacuzzi), indlu yangasese yeendwendwe, amagumbi okuphumla amabini, iiveranda ezi-3 kunye nedekhi yephuli enemibono ekhwankqisayo yeDama laseHartbeespoort, iMagaliesburg kunye neentaba zaseWitwatersrand.
Izinto ezinomtsalane kule ndawo ziquka:
Ulondolozo lweNgwe kunye neNja yasendle
Umzi-mveliso wesonka samasi
Iimarike zaseAfrika kunye neCurio
Ukubuyiselwa kwisimo sangaphambili seVulture
Ndiya kufumaneka ngefowuni / i-imeyile ngexesha lokuhlala kwakho
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hartbeespoort